सेयरमा रातो झण्डा ६५ अंकको गीरावट, तैपनि कुन–कुन कम्पनीले कमाए हेर्नुहोस् ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बजार > सेयरमा रातो झण्डा ६५ अंकको गीरावट, तैपनि कुन–कुन कम्पनीले कमाए हेर्नुहोस् !
काठमाडौ । गत साताको अन्त्यमा १७६२.२१ अंकमा रहेको सेयर बजार यो साता १६९७.१७ अंकमा झरेको छ । गत साताको तुलना गर्दा यो ६५.०४ अंकको गीरावट हो । आईतबार बिदाको दिन परेका कारण यो साता ४ दिनमात्र सेयर कारोबार भयो । बजारमा पहिलो ३ दिन दोहोरो अंकको गीरावट आयो । साताको कारोबार अन्तिम दिन ०.३१ अंकको सुधार भएर सेयर बजार बन्द भयो ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १४६ कम्पनीहरुको कारोबार भए । यो साता सेयर बजारमा दुई अर्ब ८४ करोड रुपैंयाको ५३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरका ४० लाख छ हजार आठ सय ९० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भए ।
‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा ११.६७ अंकले घटेर ३६७.०२ अंकमा आईपुगेको छ ।
यस साता कारोबार रकम (१९ करोड २७ लाख ३० हजार रुपैयाँ) को आधारमा सिभिल बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या (पाँच लाख ८४ हजार कित्ता) को आधारमा तथा कारोबार संख्या (१७४९ वटा) को आधारमा पनि सिभिल बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा सिभिल बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, बैंक अफ काठमाण्डौ, एभरेस्ट बैंक, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी उत्कृष्ट कम्पनी ठहरीए ।
समग्रमा हेर्दा, यो साता सेयर बजारमा निकै उतारचढाव आयो । बजारमा कुनै पनि कम्पनीका लगानीकर्तामा उल्लेख्य आकर्षण रहेन । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव र भारत सरकारको ५ सय र १ हजार दरका भारु नोट बन्द गर्ने निर्णयले नेपाल सेयर बजारमा प्रभाव परेको हो । यस्तो प्रभाव नेपाली सेयर बजारमा मात्र नभएर विश्व सेयर बजारमा नै देखिएको छ ।
२०७३ कार्तिक २७ गते ०९:४० मा प्रकाशित
थाहा पाईराख्नुहोस् है, फाईनान्स कम्पनीले पायो २९ करोड ५४ लाख रुपैंया बराबरको शेयर निष्काशन अनुमति
अन्योल कायमै भएपछि ११ मा भर्ना हुने मापदण्ड फेरियो !
बुढीगण्डकी आयोजनाः सरकारले भन्यो बैंक खाता खोल्नका लागि लालपूर्जा दिनुस् !
३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ‘थ्री बी’ १९ महिना भित्रै निर्माण सक्ने